China Yakaputswa nhema tii fekitori uye vagadziri | Yibin Tea
YATsemuka YEMAHARA TEKI
Yakatsemuka tii tii rudzi rweiyo yakapatsanurwa kana granular tii, chinova chigadzirwa chakakura mumusika wepasi rose wetii, inoverenga ingangoita 80% yehuwandu hwehuwandu hwekunze hweiyi pasi. Iyo ine yekugadzira nhoroondo yeanopfuura makore zana.
Musika mukuru unosanganisira United States, Ukraine, Poland, Russia, Turkey, Iran, Afghanistan, Britain, Iraq, Jordan, Pakistan, Dubai nedzimwe nyika dzeMiddle East.
Nyowani uye yakasimba hwema
Yakaputswa tii tii rudzi rweiyo yakaputsika kana granular tii. Icho chigadzirwa chakakura mumusika wepasi rose weti. Iyo inoverengera ingangoita 80% yeiyo yakazara yepasi rose tii kunze kwenyika. Iine nhoroondo yeanopfuura makore zana ekugadzirwa.
Iyo yakapera nhema tii yakatsemuka kana granular muchitarisiko, muto unopenya mutsvuku, kunhuwirira kuri kutsva, kuravira kwakapfava.
Kuoma, kumonyanisa kana kukanya, kuvirisa, kuomesa
Yakaputswa nhema tii yakakamurwa kuita yechinyakare uye isiri yechinyakare maitiro maererano nemaitiro ekugadzira. Yisiri-yechinyakare maitiro akapatsanurwa kuita Rotorvane maitiro, CTC maitiro, Legger maitiro uye LTP maitiro. Iyo mhando yechigadzirwa uye manyorerwo enzira dzakasiyana dzekugadzirira dzakasiyana, asi kupatsanurwa kwemavara eiyo yakaputswa nhema tii uye kuoneka maratidziro erudzi rumwe nerumwe zvakangofanana. Yakaputswa nhema tii yakakamurwa kuita ina mavara maratidziro: shizha tii, yakaputsika tii, yakachekwa tii, uye poda tii. Mashizha emashizha anoita micheka kunze, inoda mapfundo akasimba, magirazi marefu, yunifomu, rakachena ruvara, uye goridhe (kana goridhe shoma kana risina). Iyo endoplasmic soup inopenya tsvuku (kana yakajeka tsvuku), ine kunhuwirira kwakasimba uye kunogumbura. Zvinoenderana nehunhu hwayo, iyo yakakamurwa kuita "Flowery Orange Pekoe" (FOP) uye "Orange Yellow Pekoe" (OP). Chimiro cheiyo yakaputsika tii ine granular, uye iyo granules inofanirwa kuve yunifomu muhuremu, iine mashoma masendi (kana asina masendi), uye neruvara rwakatsetseka. Sopu yemukati ine yakasimba tsvuku tsvuku uye itsva uye yakasimba hwema. Zvinoenderana nehunhu, iyo yakakamurwa kuita "maruva orenji uye yero pekoe" (Maruva). Broken Orange Pokoe (FB.OP), "Broken Orange Pokoe" (BOP), Broken Pekoe (BP) nemamwe mavara. Chimiro cheiyo yakatemwa tii ndeye fungus-yakaita maflakes, inodikanwa kuti ive inorema uye kunyange, muto wacho wakatsvuka uye kupenya uye hwema hwacho hwakasimba. Zvinoenderana nehunhu, iyo yakakamurwa kuita "Flowery Broken Orange Pekoe Fanning" (FBOPF) uye "FBOPF" (inonzi FBOPF). BOPF), "Pekko Chips" (PF), "Orange Chips" (OF) uye "Chips" (F) uye zvimwe zvigadzirwa. Iyo yeupfu tii (Guruva, D pfupi) iri muchimiro chejecha rezviyo, uye inoda huremu hwakaenzana uye hwakatsetseka ruvara. Sopu yemukati yakatsvuka uye yakasviba zvishoma, uye hwema hwacho hwakasimba uye hunopwanya zvishoma. Pamhando ina dzataurwa pamusoro apa, tii yemashizha haigone kuve nezvimedu tii, tii yakaputsika haina macheki, uye tii yehupfu haina tii tii. Iwo maratidziro akajeka uye zvinodikanwa zvakaoma.
1. Kupisa: Iyo yakakwirira tembiricha, nekukurumidza iyo mhando yeti inozochinja. Iyo browning kumhanya yeti inowedzera 3-5 nguva kune yega gumi degrees Celsius kuwedzera. Kana iyoi ikachengetwa munzvimbo iri pasi pe zero zero Celsius, kuchembera uye kurasika kwemhando yetii kunogona kutsikirirwa.
2. Humunyoro Naizvozvo, iyo lipids inogona kupatsanurwa zvinobudirira kubva kumaoksijeni mamorekuru mumhepo kudzivirira kuora kweiyo oxidative ye lipids. Kana hunyoro hwemumuti wetii hwapfuura 5%, hunyoro hunozoshandurwa kuita zvinonyungudika, zvichikonzera kushanduka kwemakemikari nekukurumidza kudzikira kwemashizha etii.
3. Oxygen: Iyo oxidation ye polyphenols muiyi, iyo oxidation yevhitamini C, uye iyo oxidative polymerization yeaaflavins uye maarubigins, ese ane hukama neoksijeni. Aya majekiseni anogona kuburitsa zvinhu zvekare uye nekukuvadza zvakanyanya mhando yetii.
4. Chiedza: Iradiation yechiedza inomhanyisa kufambira mberi kwekuchinja kwakasiyana kwemakemikari uye ine mhedzisiro yakaipa kwazvo pakuchengetwa kwetii. Chiedza chinogona kusimudzira oxidation yemiti pigments kana lipids, kunyanya chlorophyll inogona kuparara nechiedza, uye mwaranzi yeultraviolet ndiyo inonyanya kukosha.
Inokurumidza nzira yekuchengetera: Rongedza iyo tii, rongedza ringi rakapetwa rakakomberedza aritari yeceramic, wobva warongedza iyo inokurumidza muhombodo yemachira woiisa pakati pebhegi tii, chisunga muromo wearitari, woiisa pakaoma, nzvimbo inotonhorera. Zviri nani kushandura quicklime bhegi mwedzi imwe chete kusvika kumwedzi miviri.
Marasha nzira yekuchengetera: Tora magiramu 1000 emazimbe muhombodo diki, woiisa pasi peatari yetiles kana bhokisi diki resimbi, wobva warongedza mashizha eetii akarongedzwa pamusoro payo muzvikamu uye zadza muromo weyakavharwa atari. Marasha anofanira kutsiviwa kamwe chete pamwedzi.
Refrigerated nzira yekuchengetera: Isa tii nyowani ine hunyoro husingasvike 6% musimbi kana matanda tii tangi, chisimbise gaba netepi, woisa mufiriji pa5 ° C.
Pashure: Sichuan Congou Nhema tii
Zvadaro: Kuding tei